Ngwaọrụ SEO - Nyochaa nke SEOmoz Pro Toolset
SEOmoz Pro Ngwá Ọrụ Nyocha
Thursday, January 13, 2011 Fraịde, Machị 1, 2013 Douglas Karr
Nchọpụta Nchọgharị Nchọpụta (SEO) dị oke mkpa maka atụmatụ uto ọ bụla. Ọ bụ eziokwu na mmekọrịta mmadụ na ibe ya bụ ihe ngosi dị n’elu mmiri, mana nke bụ eziokwu bụ na ihe dịka 90% nke ndị na - eji Intanet eme ihe ga - eme opekata mpe otu n’ime usoro ịntanetị. Compound na eziokwu ahụ bụ na onye na-arụ ọrụ na-achọ ọrụ nwere ebumnuche iji mee mkpebi nzụta ọtụtụ oge… ị ga-amalite ngwa ngwa ịmata ihe kpatara azụmaahịa niile kwesịrị ịnwe usoro ịntanetị zuru oke nke gụnyere njikarịcha njikarịcha nyocha.
Ọ bụrụ n ’iwepụtabeghị oge iji nyochaa Ngwa SEOmoz Pro, M ga-agba gị ume ka. Ihe isi ike bụ na ịkwesighi ịbụ Pro iji ya - ihe megidere ya. Ngwá ọrụ ahụ nwere ike iburu onye ọ bụla nwere mmasị iji melite ọkwa ha na engines ọchụchọ ma nye ha ngwaọrụ zuru oke dị mkpa iji bulie saịtị ha ma karịa asọmpi ahụ. Anyị na-agbagharị ngwugwu maka ndị ahịa anyị ọ bụla.
Ndị mara mma na SEOmoz kwere ka anyị nyefee akaụntụ na 2,500th blog post ememe - nke meriri Mack Earnhardt nke Agile Reasoning. (A ka nwere ọtụtụ ihe nrite - jide n'aka na denye aha na ala anyi na ịpị njikọ ịdenye aha na nkụnye eji isi mee)
Dị ka ekele, achọrọ m ide nyocha miri emi nke na-ekwu maka atụmatụ atọ kachasị ike nke SEOmoz Pro Toolset:
Nchọpụta iri ari na-aga kwa izu na nsochi nsuso: Sọftụwia ahụ na-awagharị saịtị ahụ kwa izu ma gwa onye ọrụ nke nsogbu nwere ike ịmetụta ogo ogo. A na-enyocha isiokwu maka ọkwa na Google, Bing, na Yahoo megide ndị asọmpi.
Nyocha mpi njikọ: Ghọta ihe weebụsaịtị na-ejikọ gị na ndị asọmpi gị, na-enyere ha aka ịkwado ọfụma. Zube saịtị ndị a ka edepụtara ha ma melite arụmọrụ gị.
Njikwa Ihe di na peeji: A snapshot nke otu onye ọrụ si na peeji nke Keywords na-arụ. Mfe akara ule na nyocha ihu akwụkwọ zuru ezu na-enyere aka ibute nnukwu ebe maka mmelite ma nye nkọwa zuru ezu banyere otu esi melite njikarịcha na ibe.
Ọ bụrụ na ndị na-ege gị ntị nọ na United States na ị na-achọ ileba anya, nyochaa ma melite nsonaazụ njin ọchụchọ gị, SEOmoz Pro bụ ihe achọrọ ngwaọrụ.
Tags: seomozseomoz ngwaọrụ
Teknụzụ Azụmaahịa: Usoro Apple
ABC nke ntanetị
Hey Douglas M na nso nso a weghaara SEOmoz na ha 1month free ikpe 🙂… M na-achọgharị maka ụfọdụ nyocha ma chọpụta post a, ọ bụ ezigbo ihe ederede! Ahụbeghị m oge iji jiri akaụntụ m ma ga-eme n'oge na-adịghị anya dịka m ga-achọ ịma ma ịdebanye oge zuru oke! Mention na-ekwupụta ndị na-ege ntị na US, m nọ na UK ma lekwasị anya na UK na ụfọdụ ndị ahịa Europe kwa - ọ ga-abara m uru?
Ndewo Chester, ị nwere ike chọọ gShiftLabs, ha na-ahapụ gị ka ị soro ụwa.
Zitere m na iPad
Daalụ maka nkwanye M na-apụ inwe anya ugbu a 🙂
Jun 26, 2011 na 5:48 AM
Ndewo Douglas, anyi na SEOmoz Pro jiri ọnwa ole na ole na ndị ahịa nọ na Philippines ma ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Odoghi anya ma onwere ihe na-efu. Nlekọta anya n'uju? Daalụ!
Jun 26, 2011 na 6:24 AM
Nke ahụ dị mma ịnụ! Mgbe m na-achọ ịnwale ụfọdụ nsonaazụ European n'oge ahụ, enweghị m ike ịnweta ozi ọ bụla. M ga-enye ya oké ifufe ọzọ!
Aug 22, 2011 na 3: 36 AM
M ga-anwale ya. Free na-anwale otu ọnwa. Yabụ, ka ahụ.
ekele, nke ahụ bụ nyocha na-adọrọ mmasị
Mee 28, 2012 na 10: 16 AM
SEOmoz tool set bụ ihe ga-adịrịrịrị SEO niile na ndị niile gbasara ọrụ nchọta ọchụchọ ma chọọ iweta weebụsaịtị ha na ibe mbụ nke ngwa nchọta ngwa ngwa enwere ike.
Mee 28, 2012 na 6: 04 PM
Daalụ maka ịkekọrịta nyocha gị. Ọbụna ị bụ nyocha dị mfe, ahịrịokwu a nwetara m: nke a abụghị maka uru. Jọ tụrụ m na m ga-efufu oge na mgbalị dị ukwuu. Daalụ!
Naanị asị ha na-akwụ ụgwọ kaadị akwụmụgwọ, m ga-achọ ịkwụ ụgwọ na paypal.